Mampitahainay ny iMac Pro miaraka amina PC misy fika mitovy | Vaovao momba ny gadget
Mampitahainay ny iMac Pro miaraka amina PC misy fika mitovy ihany koa
Tontosa ny fifanolanana, ny orinasa Cupertino (Apple) omaly dia nanolotra revolisiona vaovao ao anatin'ny solosaina birao misy azy, miresaka momba ny iMac Pro izahay, ny fiarahana eo amin'ny iMac sy ny Mac Pro izay efa nofinofisin'ny maro. Ity ary, mazava ho azy fa tsy ho mora vidy izany. Tsy misy ny fiakaran'ny vidim-piainana izay iadian'ny mpiaro ny PC fa ny PC manana ny mampiavaka azy dia kely dia kely ny vidiny, ny tanjona lehibe ahafahan'ity karazana mpampiasa misafidy solosaina PC ity mihoatra ny vokatra ao amin'ny orinasa. Cupertino, izay ny fanaingoana efa fantatsika, dia voafetra ihany. Na izany aza… Inona no tena izy fa PC dia mora vidy kokoa noho ny iMac Pro? Andao hojerentsika ireo fampitahana ireo.
Amin'ity fotoana ity dia te-hiatrika ny fomba fijery mety rehetra izahay rehefa mividy solosaina misy ireo toetra ireo, ary koa ireo solony. mba hahafahanao mamorona ny hevitrao manokana momba an'io, tsy entin'ny clichés, na amin'ny fialamboly dokam-barotra. Raha te hahalala safidy manokana ianao dia azonao atao ny manararaotra ny index hankanesana any haingana araka izay tratra.
1 Vidintsika vita ve sa ataontsika izany?
2 Ohatrinona no tokony hananantsika vola hampiasana PC mitovy?
3 Fa maninona ny iMac Pro no tsara kokoa noho ny PC manana ireo toetra ireo?
4 Fa maninona ny PC amin'ny faritra no tsara kokoa noho ny iMac Pro?
Vidintsika vita ve sa ataontsika izany?
Eto isika no manana ny voalohany amin'ny fanontaniana, tsy Apple irery no orinasa mandray ny omby amin'ny trompetra raha manolotra an'ity karazana safidy ity ho an'ny matihanina. HP, ohatra, dia manana ny fizarany manokana ary ny Z840 modely manana toetra mampiavaka azy ary manomboka amin'ny 4.300 € eo ho eo, ary mazava ho azy, amin'ity toe-javatra ity dia tsy manana peripheral, na UBS-C isika, ary raha ny marina, ny HP dia tsy manome na dia ny kinova Windows aza misy an'ireto toeram-piasana ireto, araka ny henonao dia azonao atao ny mandray an'io maodely io Windows 7 Professional 64, na dia tsy misy fahamarinana aza dia misy ny fanavaozana maimaimpoana tanteraka ny Windows P10 Pro 64.
Raha fintinina, raha 4.300 € ireo (na € 3.300 aprx raha mahazo ny kinova ambany avy hatrany isika, ny Z640) tsy maintsy manampy monitor miaraka amin'ny toetran'i Apple isika, izany hoe misy vahaolana 5K, ary koa ireo peripheraly sisa, ary na dia tsy hanana tombony vitsivitsy aza isika, toy ny hoe tsy izy rehetra. Raha fintinina, ny fahazoana toeram-piasana, ohatra HP, dia toa tsy dia manintona loatra raha oharina amin'ny iMac Pro.
Ho tombony, ity karazana toeram-piasana ity dia manana fanamboarana avo lenta, tsy hiresaka momba ny serivisy ara-teknikan'ny orinasa tsirairay izahay, zavatra azon'ny Apple ireharehana, fa ny HP kosa tsy dia taraiky ao aorian'ity karazana vokatra ity, izay koa manana antoka telo taona. Mazava ho azy… Mahaliana ve ny mividy toeram-piasana miasa HP miaraka amin'ireo fampiasa ireo? Tsy maintsy hiady hevitra momba izany ianao.
Ohatrinona no tokony hananantsika vola hampiasana PC mitovy?
Manana safidy hafa isika afaka manamboatra PC misy fika saika tsara kokoa isika, araka ny itiavantsika azy, manome ny fahatokisantsika an'ilay orinasa tadiavinay. Mandeha any izahay miaraka amin'ny kajy tsotra (mandeha tsy misy filazana fa misy tokoa ny vokatra mora kokoa sy lafo kokoa noho ireo nofidiko, nanandrana ny ho mahatoky araka izay azo atao amin'ny iMac Pro aho).
Fanaraha-maso 5K HP Z27q - 995 euro ao Amazon
Intel Xeon E5-2630V4 2.2 GHz BOX - € 735 amin'ny PC Components
AMD Radeon Pro Vega 56 - (tsy misy vidiny ofisialy) 1.500 € eo ho eo
Kingston KVR21L15Q4 - 32GB ECC DDR4 - € 296,49
Samsung 850 EVO - 1TB SSD - € 322,92
Logitech 920C WebCam - € 74 (amidy) ao Amazon
MSI x99A SLI PLUS Motherboard - € 219 amin'ny PC Components
PCI-E miaraka amin'ny 2 USB-C UGREEN - € 50,99 amin'ny Amazon
Thermaltake Water 3.0 Extreme S - 109 € ao amin'ny PC Components
Corsair HX1000i 1000W 80 Plus Platinum Modular - 233 € ao amin'ny PC Components
TOTOTRA: 4.535 €
amim-pahombiazana, Ny zavatra tsara momba ny fanangonana ny PC samirery dia ny fahafahantsika mandingana singa marobe, manomboka amin'ny PCI-e an'ny USB-C, manaraka ny WebCam misy vahaolana FullHD sy maro hafa, nefa indray mandeha izahay dia tsy hivadika amin'ilay vokatra tianay hampitahàna, ny iMac Pro. Na izany aza, mamaly ireo karazana solosaina ireo amin'ny andiana filàna tsy maintsy arosontsika, noho izany dia marina fa ny vokatra iray amin'ireo toetra ireo dia mety kokoa amin'ny mpampiasa resahina, na dia tsy misy singa sasany aza ary mivelatra amin'ny hafa.
Fa maninona ny iMac Pro no tsara kokoa noho ny PC manana ireo toetra ireo?
Tsy ilaina intsony ny milaza izany amin'ity tetibola ity Tsy nampiditra fifandraisana Ethernet 10Gb izahay, na ny kitendry, na ny totozy ampidirin'i Apple ao anaty boaty (Magic Keyboard 2 sy Magic Mouse 2). Mazava ho azy, ny iMac koa dia manana WiFi 802.11ac sy Bluetooth 4.2.
Ary tsy nampidirinay tamin'ny vidin'ny solosaina PC ny kinova Windows 10 mety tsy maintsy vidiana amin'ny vidiny mifanaraka amin'izany, na izany aza, ny macOS dia efa tafiditra maimaim-poana amin'ny iMac Pro. Midika izany rehetra izany fa mitovy ny PC toetra izay mety tsy ahazoan'ny iMac Pro tombony. Ny manasongadina ny iMac Pro dia ny fiatrehantsika ny All-in-One, Midika izany fa manana ny monitor izahay sy ny sisa amin'ireo fitaovana enti-miasa tafiditra ao anatiny, ka kely dia kely ny habaka hipetrahany. Ny teboka iray hafa tena miavaka amin'ny iMac Pro dia ny fiantohana fiakarana avo lenta miaraka amin'ny tabataba kely, ny orinasa Cupertino dia niavaka foana noho ny fanaovana fitaovana mangina noho ny injenierany sy ny rafi-panafody omen'izy ireo.
IMac Pro dia Namboarina tamin'ny aliminioma 7000 miloko volondavenona, izay manome azy fahamailoana, ny endrika koa dia isan'ny vidiny, tsy misy fisalasalana. Tonga ny olana rehefa ny famolavolana amin'ny famaritana, zavatra izay niseho tamin'ny maodely farany an'ny Mac Pro ary tian'i Apple hovahana amin'ny fampiraisana azy amin'ny laharan'ny iMac.
Ny teboka matanjaka iray an'ny Apple dia ny SAT, ny orinasa Cupertino dia nalaza tamin'ny serivisy taorian'ny fivarotana sy ny fomba nampialaovany ny mpanjifany. Ny olana amin'ny iMac Pro, na ny iPod aza dia ho voavaha tampoka eo amin'ny Apple Store. Fantatra fa ny serivisy teknikan'i Apple dia tsy dia tsara tarehy amin'ny fifantina, amin'ny tranga maro dia misafidy ny fanoloana tanteraka ny vokatra izy ireo, ary na ny teknisian'izy ireo aza manana traikefa sy fahalalana manokana ho an'ny katalaogany manokana, tsy hisy hahalala vokatra bebe kokoa sy tsara kokoa. miaraka amin'ny efijery paoma vita pirinty fa izy ireo ihany.
farany macOS, Marina fa ny tsy fitoviana dia mipoitra (mihena hatrany ary vitsy) miaraka amin'ireo programa sasantsasany izay mandeha amin'ny Windows, na izany aza, ao anatin'ny tontolon'ny asa dia marina fa ny rafitra fiasan'ny orinasa Cupertino dia manana atiny betsaka, miasa amin'ny macOS ireo programa na rindranasa. miaraka amin'ny fahamarinan-toerana mahavariana, raha ny tena izy, izany no antony mahatonga ny matihanina maro amin'ny fakàna sary, ny endrika ary ny mozika misafidy an'i Mac ho sehatra ho azy ireo, ny fanavaozana tsy tapaka an'ny Apple, fanatsarana ny fiarovana sy fitoniana saika maharitra maharitra ela dia nanome laza mendrika azy io. Na dia misy programa Microsoft sasany toy ny Office miasa tsara lavitra amin'ny Windows aza ny amin'ny macOS, etsy ankilany, raha mandeha amin'ny alàlan'ny automatisation birao ny filanao dia tsy mila an'ity karazana solosaina ity ianao.
Fa maninona ny PC amin'ny faritra no tsara kokoa noho ny iMac Pro?
Ho hitantsika ihany koa ny ilan'ny sarimihetsika. Araka ny efa nolazainay, ny fametrahana PC amin'ny alalantsika dia manana tombony, maro amin'izy ireo ankoatr'izay, ny voalohany ary angamba mety indrindra dia ny ahafahantsika misafidy ireo singa tadiavintsika, manome ny sasany ary manome bebe kokoa amin'ny hafa, amin'izay hahatratrarana ny fitoniana marina . Ny tombony lehibe amin'ity karazana vokatra ity dia ny ahafahantsika miovaova arakaraka ny itiavantsika azyRehefa tiantsika sy izay tadiavintsika dia manana ny singa tsirairay avy isika.
Etsy ankilany, Apple dia misafidy ny hametaka ny ankamaroan'ny singa amin'ny motherboard (afa-tsy ny SSD, saika ny zava-drehetra), izay miteraka fiovan'ny singa tsy azo tsinontsinoavina. Marina fa ilaina izany raha te hahazo toerana sy rivotra tsara kokoa, na izany aza, ny filana RAM bebe kokoa dia tsy midika hoe mila mpanodna matanjaka kokoa, ary raha te hanova singa amin'ity fomba ity amin'ny iMac Pro ianao dia tsy hanana safidy fa mividiana iray hafa feno. Azo antoka, Ny fahalalahan'ny fanovana amin'ny ampahany omen'ny PC amina ampahany dia tsy omen'ny solosaina avy amin'ny orinasa Cupertino mihitsy.
Amin'ny lafiny iray, Windows dia mampindrana ny tenany bebe kokoa amin'ny fiovan'ny vokatra rindrambaikoFantatsika sahady fa tsy olana amin'ny Windows ny mifanentana, efa ho vonona amin'ny saika ny zava-drehetra izy, io no sehatra be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao ary tsy isalasalana fa ilay manana fandaharana be indrindra ao aoriany. Ary koa, ny asan'i Microsoft amin'ny Windows 10 dia somary tsara, ary mamaly azy ny vahoaka. Eo amin'ny ilan'ny latabatra misy antsika ny gaming, tsy isalasalana fa ny PC misy ireo toetra ireo miaraka amin'ny Windows dia hampindrana ny tena tsara indrindra sy ny farany amin'ny tontolon'ny lalao video, miaraka amin'ny valiny mahavariana, zavatra izay tsy azontsika atao mihitsy amin'ny iMac Pro, indrindra noho ny tsy fisian'ny lalao video ho an'ny sehatra.
Manantena aho fa ity fampitahana sy fananganana hevitra ity dia nanampy anao hamorona hevitra kely momba ny tombony sy fatiantoka mety hananana hahazoana iMac Pro na misafidy PC misy faritra manana toetra mitovy aminy, ankehitriny ianao no manapa-kevitra, aza avela hisy hanapa-kevitra ho anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Mampitahainay ny iMac Pro miaraka amina PC misy fika mitovy ihany koa
Izay ilainao amin'ny PlayStation VR ary ohatrinona ny vidin'ny zava-drehetra aminao
House of Cards 5: "Ny anjarako"